Indlela yokuya kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Instagram IiNtlalo zeNtlalo
Ungahamba njani kwi-Instagram
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 727
I-Instagram okwangoku yenye yezona zicelo ziwayo. Kananjalo usetyenziso kunye neplatifomu yenombolo yokuqala emhlabeni jikelele. Impembelelo yayo Ifikelele kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Kwiminyaka yakutshanje ikwazile ukuziqhelanisa nokukhula kwe-intanethi. Le yokugqibela uyinike ithuba ngaphezulu kwamanye amaqonga ezininzi kunye nokusetyenziswa. Yinto eyenze ukuba ibe sisicelo ngoku.
Kwiziqalo zayo, i-Instagram ime njengeqonga lezithombe. Kancinci kancinci baye balungelelanisa eminye imisebenzi. I iividiyo Bajoyine iqonga. Emva koko, ukuthengwa kwayo kwenziwa ngabaphathi be-Facebook. Le yokugqibela yayiyinto elungileyo kubasebenzisi bayo. Abo babona indlela ukuthumela imiyalezo ngokuthe ngqo, ukugcinwa kokugcinwa kogcino kunye namabali e-instagram afakiwe kwisicelo.
I-Instagram ineempawu ezininzi ezilungileyo njengokulula kokusetyenziswa kwayo. Zonke ezi zinto zinomtsalane zibonelele kwaye ziyaqhubeka nokubonelela ngobuninzi bokubonisa kokubini usetyenziso kunye neqonga. Yiyo loo nto abantu abaninzi bezibuza ungayi kwi-instagram.
Ungayikhuphela njani i-Instagram kwifowuni yakho
Indlela kuphela ungayi kwi-instagram kwifowuni yakho khuphela usetyenziso kwi. Eli candelo lilula kakhulu. Kwaye kuxhomekeke kuhlobo luni lwesixhobo sefowuni onayo. Ekuqaleni i-instagram yayenzelwe kuphela izixhobo zesoftware yinkqubo ye-iOS, oku kubandakanya izixhobo ze-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod. Emva kwexesha inkampani ikwadibanisa usetyenziso lwezinto ezingena kwinkqubo ye-Android.
Oko i-instagram yenza ukuba isicelo sayo sifumaneke kwi-Android. Oku kunokufumaneka kwiGoogle Play Store. Kwimeko yezixhobo zefowuni ze-iOS, unokufumana ungayi kwi-instagram kwiVenkile yeApple. Ukukhuphela i-instagram kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS asimahla.
Khuphela kwizixhobo ze-Android
Ukukhuphela usetyenziso lwe-Instagram kwifowuni yakho ye-Android kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Ngena iVidiyo yokudlala.
Ukungena kwiVenkile yokuDlala, kufuneka ube neGmail okanye iHotmail.
Nje ukuba ungene kuVimba Ivenkile kufuneka ucofe kwi-injini yokukhangela kwaye ufake igama lika-instagram.
Xa sele benike iziphumo zokukhangela kwakho, faka isicelo esibhaliweyo se-instagram.
Iqhosha lokukhuphela liza kuvela ecaleni kwe-logo kunye nenkcazo yeapp. Kufuneka ucofe kuyo.
Nje ukuba ucofe iqhosha lokukhuphela, usetyenziso luzakuqala ukukhuphela kwifowuni yakho.
Xa ukhuphelo lugqityiwe, kufuneka ucofe isicelo esivulekileyo.
Uza kubona ukuqala kwe-Instagram kunye nokukhetha ezimbini, ukuba ungena okanye uyila iakhawunti.
Kuxhomekeka kwimeko yakho, khetha ukhetho.
Khuphela kwizixhobo ze-iOS
Inkqubo yokukhuphela i-instagram ukusuka kwizixhobo ze-iOS, ilula kakhulu njengoko injalo kwi-Android.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena kwiVenkile yeApp.
Okwesibini kukukhangela igama kwi-intanethi kwi-injini yokukhangela. Ukuba sisicelo sokuthandwa okukhulu, i-instagram ekuqaleni kweVenkile ye App ngoko ngamanye amaxesha akukho mfuneko yokwenza uphando.
Nje ukuba usifumene isicelo kufuneka ucofe ukukhuphela.
Emva kokuba isenzo senziwe ungavula isicelo.
Ukuba une-akhawunti ye-instagram, faka ulwazi lwakho. Ukuba awunayo, kufuneka uvule iakhawunti.
Ungayivula njani i-instagram evela kwikhompyuter
Ungahamba njani kwi-instagram Ukusuka kwikhompyuter kube lula ngakumbi kunokuba usuka kwifowuni. Ekuqaleni, yayizixhobo zecellware kuphela. Ngokuhamba kwexesha, inkampani yayisenza uhlengahlengiso kwaye namhlanje kunokwenzeka ukuba ungene kwiqonga ngewebhusayithi yayo esemthethweni.
Ukufikelela kwi-intanethi kwiikhompyuter unokukwenza ngokusebenzisa isikhangeli sakho okanye ngokufaka usetyenziso kwi-PC okanye kwi-Mac yakho.
Eyona ndlela ilula ungayi kwi-instagram kwikhompyuter yakho kwiphepha layo elisemthethweni. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo:
Ngena kwiphepha elisemthethweni le-Instagram ukusuka kwikhompyuter yakho.
Nje ukuba ungene ungene ungangena okanye wenze iakhawunti. kuxhomekeka kwimeko yakho, uyenza kwaye uyiloo nto.
Uyakha njani iakhawunti ye-instagram
Ukwenza i-akhawunti ye-instagram kufuneka ulandele la manyathelo angezantsi.
Ngenisa i-app okanye iphepha elisemthethweni le-Instagram. Kuxhomekeke kwityala lakho.
Ifomu iya kuvela kwiphepha lasekhaya, kufuneka ulizalise:
Kuya kufuneka uqale ufake inombolo yakho yefowuni okanye i-imeyile yakho yangoku.
Igama olifunayo kumsebenzisi wakho.
Ukususela ekuthengweni kwe-Instagram, unokwenza iakhawunti nge-akhawunti yakho ye-Facebook.
Izinto eziluncedo kunye nezibonelelo ze-instagram
Ukudalwa kwe-instagram ngo-2010 njengenkqubo yefoto yazisa elinye lamaqonga athandwa kakhulu kwihlabathi. I-Instagram ayisiyiyo enye yezonaapps zidumileyo, ikwayenye yeentandokazi zehlabathi. Uyilo lwayo olulula luqinisekisa abasebenzisi balo ngenkqubo eyenziwe lula kakhulu. Kodwa, ukongeza koku, iqonga kunye nokusetyenziswa kunezi zinto zilandelayo kunye nezibonelelo:
Enye yezona zinto zixabisekileyo zesicelo kukuba asimahla. Xa ukhuphela usetyenziso kwisixhobo esenziwe ngeselula kungenziwa mahala. Kwaye akukho ndleko yokungena eqongeni ukusuka kwikhompyuter.
Umsebenzisi uyayithanda loo instagram ineendlela ezahlukeneyo zokusebenza. I-Instagram iguqukile kakhulu ukuqala kwayo. Iqale ngokuthumela iifoto kwaye ngoku umsebenzisi angathumela imiyalezo. Ngokufanayo, ikwavumela umsebenzisi ukuba athathe iifoto kwisicelo. Unokongeza iifilitha kwiifoto zakho.
Inethiwekhi yezoluntu ye-instagram ikwayindlela yokunxibelelana. Itsiba izithintelo kwaye kule mihla awukwazi ukunxibelelana kuphela nabahlobo bakho abasondeleyo, kodwa nomntu wonke.
Ngaphakathi kwe-instagram uyakwazi ukufumana umxholo oyifunayo. Oku kunokwenzeka ngenxa yoyilo lwesicelo. Olu luyilo luvumela umsebenzisi ukuba afikelele kumxholo wecandelo kwiindawo ezahlukeneyo.
Isetyenziswe njani i-instagram
I-Instagram iyakwazi ukwenza izinto ezahlukeneyo. Umsebenzisi unokuzisebenzisela iinjongo azifunayo. Iinkampani zinelungelo elikhulu ngaphakathi kweqonga. Kwaye inika ii-akhawunti ezincinci i-boardboard yokufezekisa udumo.
Ngaphambili besikhankanye indlela ekulula ngayo ukusebenzisa i-instagram. Iqonga linika abasebenzisi bayo iindlela ezilula zokusebenzisa iiakhawunti zabo. Nje ukuba sele ulazi inqanaba lesiseko le-instagram, into oyifunayo kukuba uqaphele kuhlaziyo olutsha.
Into e-instagram ibalasele ngohlaziyo lwayo. Namhlanje yenye yezona sicelo zigqityiweyo. Inenkqubo yokuthumela umyalezo ngokukhawuleza, unokufaka iifoto, wenze iimpapasho, ugcinwe kupapasho lwakho, uphawule kwaye unxibelelane nabanye abasebenzisi. Phakathi kokuhlaziywa kwe-instagram okutsha zezi:
Gcina imifanekiso kunye nokuvula iifoto
Ixesha elithile ngoku umsebenzisi wakwazi ukugcina iimpapasho zeprofayile yakhe. Ukugcina umfanekiso kuyinkqubo yokugcina ingxelo, apho oku kunyamalala kwiprofayile yomsebenzisi kodwa kugcinwe kwenye indawo kwiqonga elibonakalayo kuphela kumsebenzisi owenza isenzo.
Ngoku kunokwenzeka ukuba ufumane kwakhona iifoto ozigcinileyo. Iifoto ezingafakwanga zibuyela kwiprofayili ngokungathi azikaze zinyamalale.
Amabali e-Instagram kule mihla yenye yezona zinto zidumileyo nezasetyenziswayo ze-Instagram. Lo msebenzi uvumela umsebenzisi ukuba apapashe ngexesha elithile. Isici esahlukileyo kwizithuba ze-instagram eziqhelekileyo.
Ngaphakathi kwi-instagram, umsebenzisi uyakwazi ukugcina ukushicilelwa kwakhe kunye nabanye abasebenzisi kwiprofayili yakhe. Ezi zithuba zigcinwe zinokujongwa kuphela ngumsebenzisi owenza isenzo.
Amabali epapashwe kwi-instagram ngoku agcinwa ngokuzenzekelayo.
Omnye wemisebenzi ebonakalisa i-instagram ukusuka ekuqaleni ziifilitha zayo. Xa upapasho lwenziwe, umsebenzisi unoluhlu lwamacebo okucoca afumanekayo.
Oko uFacebook wathenga i-Instagram. Isicelo senziwe kwiinguqu ezininzi. Olunye lolu tshintsho imiyalezo. Ekuqaleni, indlela ekuphela kwayo abasebenzisi abanxibelelana ngayo yayikukuphawula. Namhlanje umsebenzisi unokusebenzisana nabanye abasebenzisi ngokusebenzisa i-instagram engqalileyo.
Ngokusebenzisa inqaku le-intanethi kwi-intanethi, umsebenzisi unokurekhoda iividiyo ezibonakalayo. Kule vidiyo abanye abantu abayibonayo banokunxibelelana.
Ngaphambili, ngaphakathi kwe-instagram ngekhe usondeze imifanekiso. Otshintshileyo ngohlaziyo lwamva lweqonga. Ngoku umsebenzisi uyakwazi ukusondeza iifoto, iividiyo kunye nolunye upapasho.
Okwethutyana ngoku abathengi be-instagram bayakwazi ukubukela iividiyo ixesha elide. Ngaphambili kwi-instagram kuphela iividiyo zemizuzwana ye-30 zazivunyelwe. Emva koko ixesha lonyuswe laya kwimizuzwana ye-60. Kule mihla iividiyo ezingaphezulu komzuzu omnye ziyafumaneka kwisicelo. Ikwafumaneka njani ukubabeka kwindawo yesibini oyifunayo. Izinto ebezingenakwenzeka ngaphambili.
1 Ungayikhuphela njani i-Instagram kwifowuni yakho
1.1 Khuphela kwizixhobo ze-Android
1.2 Khuphela kwizixhobo ze-iOS
2 Ungayivula njani i-instagram evela kwikhompyuter
3 Uyakha njani iakhawunti ye-instagram
3.1 1 nyathelo
3.2 2 nyathelo
4 Izinto eziluncedo kunye nezibonelelo ze-instagram
4.3 Iindlela zokunxibelelana
4.4 Umxholo oHleliweyo
5 Isetyenziswe njani i-instagram
6 Uhlaziyo olutsha
6.1 Gcina imifanekiso kunye nokuvula iifoto
6.3 Gcina iiposti
6.4 Amabali okugcina
6.9 Uhlaziyo kwiividiyo
Funda ngendlela onxiba ngayo udliwanondlebe lomsebenzi kulula kwaye ulula!
Fumanisa ukuba ngowuphi umdlalo oza kuwenza ukuba ube nomzimba olungileyo